डा. केसी आईसियुमा
कामदारबारे जापानसँग सहमति
पुनर्निर्माणका तीन वर्ष
त्रिविविको जग्गामा अरुकै रजाई
चुनाव भएको ६४ दिनपछि समानुपातिकको परिणाम आयो
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समपन्न भएको ६४ दिनपछि शुक्रबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्दै पाएको सिट संख्या अनुसार विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
तस्बिर : इलिट जोशीभीम घिमिरे
२ नम्बरबाहेकका प्रदेशमा बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको छ । त्यहाँ जनप्रतिनिधीहरुले लाइन लागेर मतदान गरिरहेका छन् ।
२ नम्बरबाहेकका प्रदेशमा बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको छ । २ नम्बरबाट चुनिने आठै सदस्य निर्विरोध भइसकेकाले उक्त प्रदेशमा चुनाव गर्न नपर्ने भएको हो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश ३ को तयारी पुरा
बुधबार हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनकालागि प्रदेश ३ मा सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको यहाँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द दवाडीले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा २४ जना निर्विरोध
संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ५९ सदस्यीय सभामा ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रदेश नम्बर २ का सम्पूर्ण सांसद निर्विरोध
प्रदेश नम्बर २ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका आठवटै प्रत्यासी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेती सोमबार अपरान्ह ३ बजे सूचना टाँस गरी उम्मेदवारी परेका आठै जना निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश नम्बर २ का सबै सांसद निर्विरोध
प्रदेश नम्बर २ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका आठवटै प्रत्यासी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिएका समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद अख्तर हुसैनले आइतबार आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उक्त प्रदेशका आठै सांसद निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
१५ मिनेट ढिलो हुँदा माओवादी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउन पाएनन् (भिडियो)
अन्य कोटाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउन गएका माओवादी उम्मेदवार नरेन्द्र शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाएनन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश १ मा ३ महिला निर्विरोध निर्वाचित
प्रदेश नं १ बाट राष्ट्रियसभाका लागि ३ जना महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित हुनेमा नेकपा एमालेकी नैनकला ओझा, माओवादी केन्द्रकी विना पोखरेल र नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं छन् ।
नयाँ शक्तिले राधेश्यामलाई मत दिने
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश–३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बरिष्ठ अधिबक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः प्रदेश ४ मा १२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
राष्ट्रिय सभाकालागि प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन :प्रदेश ७ मा १० जनाले मनोनयन दर्ता गरे
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेश ७ मा १० जनाले मनोनयन गरेका छन् । प्रदेश नं. ७ को लागि स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सिलगढी डोटीमा बुधबार साढे तीन बजेसम्म १० जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश नं ५ मा ११ जनाको उम्मेदवारी
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेश नं ५ मा ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । घोराहीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एमालेका चार, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : प्रदेश १ मा १२ जनाको मनोनयन
राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि प्रदेश १ मा बुधबार १२ जनाको मनोनयन परेको छ । एमालेको तर्फबाट ६, कांग्रेसको तर्फबाट ४ र माओवादीको तर्फबाट १ र राप्रपाको तर्फबाट १ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : २ नम्बर प्रदेशमा ९ जनाको उम्मेदवारी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि २ नम्बर प्रदेशबाट ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेससँग सहकार्य गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: उम्मेदवारी दर्ता धमाधम
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा बुधबार उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै प्रदेशमा तोकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता भइरहेको छ ।
कांग्रेसले टुंग्यायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार
कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाका लागि सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । चार वटा प्रदेशका उम्मेदवार मंगलबार नै टुंग्याएको कांग्रेसले १, २ र ३ का उम्मेदवार पनि तय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारी दर्ता आज
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता
माघ ९, २०७४
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन - दलहरू उम्मेदवार छान्दै
राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनसँगको तालमेल अनिश्चित बनेपछि कांग्रेस उम्मेदवार छनोटमा जुटेको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले तालमेल प्रयास पनि जारी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेले टुंग्यायो तीन प्रदेशका उम्मेदवार, प्रदेश ५ बाट कोमल वली
एमालेले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन वटा प्रदेशका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । स्थायी कमिटीको सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशका उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा ६७ र ३३% कै भागबन्डा
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका छन् । अब राष्ट्रिय सभा चुनावमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट ४३ जना उम्मेदवार हुनेछन् । त्यसमा एमालेका २९ र माओवादीका १४ जना रहनेछन् ।
ओली र दाहालबीच राष्ट्रिय सभामा एमालेका २९ र माओवादीका १४ उम्मेदवार उठाउने सहमति
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बाँडफाँट सम्बन्धि कार्यदलको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका छन् । अब राष्ट्रिय सभा चुनावमा बाम बगठबन्धनक तर्फबाट ४३ जना उम्मेद्वार हुनेछन् ।